उत्तर कोरियाली ‘सर्वोच्च नेता’ किम जोङ उनको तौल घटेपछि त्यहाँका जनताहरू चिन्ता प्रकट गर्दै सामूहिक रूपमा रोएका थिए ।
हुन त उत्तर कोरियामा हाँस्ने र ताली बजाउने काम पनि सामूहिक रूपमै हुने गर्दछ तर हामी वीर नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्यो के भने हाम्रो मन्त्रीको तौल घटेको छैन । लगभग सय किलोको हाराहारीमा छ ।
जुन देशका मन्त्रीको तौल सय किलो हुन्छ, त्यो देशका जनताको भाग्य चम्किन्छ । २ मन्त्रीको भाले जुधाइ आफ्नो शरीरको तौलमा केन्द्रित छ । दुब्ला–पातला पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईको दुःखमा रोई दिने कोही छैन । हुन त मेरो पनि तौल घटेको थियो, मलाई देखेर पनि उत्तर कोरियामा जस्तै यहाँ कोही रोइदिएनन् । दुब्लो हुनु पनि बडा गाह्रो छ यो देशमा । त्यसलाई त लडेर पनि जित्छु भनेर टीभीमै भन्दिन्छन् ।
प्रसङ्ग अलिकति बदलौं, डोटी घर भएका प्रेमबहादुर आले यतिखेर पर्यटन मन्त्री छन् । वनमन्त्रीका रूपमा धेरै नै बदनाम भएपश्चात उनको उपनाम ‘कार्बनडाइअक्साइड’ बनेको थियो । उनको उपनाम यति प्रख्यात थियो कि कार्बनडाइअक्साइड मन्त्रीका रूपमा उनलाई शिशु कक्षामा पढ्ने केटाकेटीहरूले पनि चिन्दथे । त्यतिखेर ‘आलेले इज्जत फाले’ जस्ता अपमानजनक मुक्तकहरू पनि लेखिए ।
तर आज परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । कार्बनडाइअक्साइड मन्त्री एकाएक किम जोङ उनको भाइ बन्न पुगेका छन् । यद्यपि मानिसहरूको कसरी दानवीकरण हुन्छ र कसरी फेरि देवत्वकरण हुन्छ भन्ने कुराको प्रेम आले बलियो प्रमाण हुन् । यहाँभन्दा धेरै दार्शनिक कुरा नलेखौं ।
नेपाली पाठकहरू दार्शनिक कुरा बुझ्ने हैसियतमा पुगेका छैनन् । यूट्युबतिर भेनासालीको झगडा हेरेर दिन बिताउनेहरू मेरो कुरा बुझ्न पनि सक्दैनन् ।
हिजोआज समाचार र सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री प्रेम आलेको चिटिक्क परेको हँसमुखी अनुहार मात्रै देखिन्छ । उनले लगाएको कोट कता सिलाएको हो ? त्यो अलिक मिलेको छैन तर उनका एकपछि अर्को कदमहरू मिल्दै गएको अनुभूति भइरहेको छ । यतिखेर उनी वास्तवमै ७ नम्बर गियरमा छड्के जाँचमा डौडिरहेका छन् । यो मंहगो लोकप्रियता हो ।
पशुपतिको धर्मशालाको मंहगो कोठाभन्दा पनि उनको लोकप्रियता महंगो बन्दैछ ।
प्रेम आले दाई पहिले दिल्लीतिर सेक्युरिटी गार्ड हो कि के गरेर बसेका थिए अरे । उनको १०० किलो तौल देख्दा त्यो हो कि जस्तो पनि लाग्छ । किनकि सेक्युरिटी गार्डको काम बस्ने, खाने, सुत्ने अनि मोटाउने हो । धेरै–थोरै अनुभव मलाई पनि छ । सुदूरपश्चिमका एक जना भट्ट थरका मुख्यमन्त्री भएका थिए । तिनी पनि उहिले दिल्लीतिरै सेक्युरिटी गार्ड थिए अरे तर तिनी किन दुब्लो छन् ? आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
दिल्ली बस्दा प्रेम आलेले पक्कै पनि ‘नायक’ चलचित्र हेरेको हुनुपर्छ । मन्त्री भएदेखि उनी प्रेम आले कम अनिल कपुर धेरै देखिएका छन् । अनुहार र शरीरबाहेक उनको हाउभाउ त्यही नायक चलचित्रको अनिल कपुरकै हारहारीमा छ । पत्रकार साथीहरू पनि के कम, पशुपतिको धर्मशाला देखेर आले ‘सक’ भएको समाचार लेखिदिन्छन् । त्यत्रो मोटोघाटो मान्छे पनि सामान्य कुरामा सक हुन्छ ? हावाकुरा !
प्रेम आले यतिखेर हिन्दी फिल्मको एक दिन मन्त्री हुने कथाको नेपाली भर्जनमा खटिएका छन् । भावुक नेपालीहरूका लागि यस्तो कर्म सिधै राष्ट्रवादसँग जोडिन्छ । विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि तोडफोड गरेको, जंगिएको, रिसाएको, कालोमोसो दलेको नेपालीलाई खुबै मन पर्छ । फ्रस्टेसनमा रहेका जो कोहीलाई यस्तो शैली मन पर्छ । यो भारत वर्षमा यस्तो कदमलाई लोकप्रिय मानिन्छ । भारतमा पनि मन्त्रीहरू सडकमा निस्किएर यस्तै होहल्ला गरिरहेका देखिन्छन् ।
पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई र बहालवाला मन्त्री प्रेम आले बीचमा शितयुद्ध चलिरहेको छ । बैगुनीलाई गुनले मार्नुपर्छ भनेर होला योगेश भट्टराईको १–१ गुन प्रेम आलेको मुखारविन्दबाट वाचन हुँदैछ ।
यसरी एकाएक योगेश भट्टराईको जीवनमा हुरी–बतास चल्न पुगेको छ । फलस्वरूप प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना नियन्त्रण गर्न अनुरोध पत्र बोकी बालुवाटार पुगेका भट्टराईले आफैं मास्क लगाउन बिर्सिएका छन् । हुन त उनले नारायणहिटी दरबारमा आफैंले रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएको अनुमति पनि बिर्सिएका थिए । मैले हुँदै होइन, दिएकै छैन भनेर पाथिभराकै कसम खाएका थिए ।
पहिले प्रेम आलेको ३ करोड नेपाली जनताले खिसी गरेका थिए । अहिले ४ करोड नेपाली जनताले हाईहाई गरेका छन् । ४ करोड यसअर्थमा कि जनगणनामा नाम टिपाउन छुटाएकाहरूले पनि प्रेम आलेको हाईहाई गरेका छन् । प्रेम आलेले सबैको इज्जत राखे, मन्त्री होस् त प्रेम आले जस्तो, प्रेम आले राष्ट्रवादी मन्त्री, कसैको डरधम्की नमान्ने देशको सच्चा सपुत प्रेम आले ... यस्तै–यस्तै भन्न थालेका छन् मानिसहरू ।
मोटो भएर के भयो त ? अटेरी प्रबन्ध निर्देशकहरूलाई ‘ओ भाइ, ओ भाइ ! के हो यार ? अलि छिटो आउनुहोस्, यो के हो हँ ? कति हजारको कोठा हो भन्न थालेका छन् । अस्ति कहिले हो रक्सी काण्ड मच्चिएको थियो । विदेश भ्रमण जाँदा रक्सी खाने कि नखाने भनेर विवाद चलेको रहेछ । सोझो मगरको छोरा प्रेम आलेले त्यो पनि सार्वजनिक गरिदिए । मगरको छोरालाई रक्सी खाने कि नखाने भनेर पनि कतै सोध्ने हो त ? झमक्क रात पर्न थालेपछि खाइहाल्छ नि ! उस्तै परे बिहानैसम्म खान्छ । जति खाए पनि लाग्दैन क्यारे ! स्लोली खाने हो नि ! खाएकोले त खाइहाल्छ नि ! ज्यान गए पनि खान्छ ।
प्रेम आले दाइ यतिखेर असली छापामार भएका छन् । ‘प्रचण्डले बनाएको मन्त्री हुँ म, बर्ता हुने हैन’ भन्दै आवेगपूर्ण अनुहार लिएर हिँडिरहेका छन् । अब फेरि मगरको रिस तपाईंहरूलाई थाहा नै होला । रिसाउँदै–रिसाउँदैन, जब रिसायो एकछिनपछि हाँस्ने गरी रिसाउँछ तर खै हिजोआज प्रेम आलेलाई लाटो रिस उठेको हो कि क्या हो जे कुरा पनि भत्काउन मात्रै लागेको देखिन्छ ।
मेरो विचार के हो भने मन्त्री–मन्त्रीको लडाइँ व्यापारीको लगानीमा पार्नु हुँदैन । राज्यले निकास दिनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि संरचना भत्काउनु राम्रो होइन । हिजो चन्द्रागिरिमा केबुलकार बन्दा पनि लौ जंगल नासियो, बर्बाद भयो भन्नेहरू धेरै थिए, आज तिनै चन्द्रागिरिमा पुगेर फोहोरी अनुहार देखाउँदै सेल्फी हान्छन् ।
प्रेम आले दाइको नियत सही छ । तर नियति गलत छ । एउटा कुरामा असहमति के भने विकास गर्नका लागि केही न केही त विनाश हुनैपर्‍यो नि ! एउटा सरकारले सहमति गरेर दिएको कुरा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै विमति राख्नु सर्वथा गलत हो । यदि त्यसो हो भने सरकारले व्यापारीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
पशुपतिमा धर्मशाला बनेको छ, त्यहाँ विदेशीहरू बस्ने हो, सेवासुविधा दिएर सोअनुरूप पैसा लिनु खासै ठूलो अपराध होइन । बरु नीतिनियम बनाउनुपर्‍यो । नेपालीलाई छुट हुनुपर्‍यो । दरबार परिसरभित्र पानी, कफी, जुस, स्यान्डविजहरू खान पाइनु पनि आघुनिक नेपालका लागि सही नै हो । भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ भने त्यो रोक्ने होला तर केही गर्नै नदिने त कसरी राम्रो भयो र ?
अलिकति आलोचना सहितको खबरदारी गरौं भन्ने विचार थियो तर मौसम खराब छ, भो लेख्दिनँ । फेरि प्रेम आले त नेपालको किम जोङ उन हुन् अरे ! मलाई पक्राउ गरेर कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रमा लगेर फ्याँकिदिए भने ...